बि.सं.२०७४ साल मङ्सीर २९ गते शुक्रवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । मङ्सीर महिनाको २९ गते शुक्रवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ डिसेम्बर महिनाको १५ तारिख ।
तिथीः दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु पौषकृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथी ।
नक्षत्रः विशाखा नक्षत्र ।
करणः गर करण १८ः५४ बजेसम्म उपरान्त वणिज करण ।
चन्द्रमाः तुला राशिमा, २०ः१८ बजेपछि बृश्चिक राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः४८ बजे ।
राहुकालः १३ः१५ बजेपछि १४ः३३ बजेसम्म ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन बुद्धिको विकास हुने र विद्याबुद्धिको सदुपयोग गर्ने संयोग पर्नेछ । आज यहाँको बौद्धिक क्षमताको मान्छेहरुले कदर र प्रशंसा गर्नेछन् । अध्ययन अध्यापन तथा लेखन एवम् वहसको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सन्तानपक्षबाट पनि सन्तोष लिन सकिने छ । पेशा एवम् व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ पाउनु हुनेछ । लाभ एवम् सफलताको कारण मानसिक शान्ति मिल्ने छ । आज पाँच अंक, रातो रङ्गको प्रयोग यहाँलाई फाप सिद्ध हुनेछ भने अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्नु पूण्यप्रद हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ । जसको कारणले गर्दा बोलीको माधुर्यताले मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्न सकिने छ । प्रतिनिधित्त्व गर्ने व्यक्ति तथा वाणीवृति हुनेहरुको लागि आजको दिन बढी अनुकूल रहनसक्ने छ । परोपकारादि समाजसेवाको अवसर मिल्नेछ भने धन–धातु–खजाना आदिको संग्रह गर्न पनि सकिने छ । कुटुम्बजनसँग मिलन हुने र व्यवहारिक कुशलता प्रकट गर्न पाइने छ । श्रृङ्गार सामाग्री आदिमा लगानीको पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई दुई नम्बर, सेतो रङ्गको प्रयोग र माँ भुवनेश्वरीको भक्तिभावले सफलतामा थप बल दिनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सोँचविचार नपुर्याई अनावश्यक रुपमा गरिएको घुमफिरले अन्ततः खर्चलाई नै प्रोत्साहन गर्ला । सुझबुझ नगरी गरिएको फुर्तिफार्तिले पश्चाताप पार्नसक्ने छ । अप्रत्यासित रुपमा कामकार्यमा अबरोध आउनाले मानसिक उद्दिग्नता हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । आयमा मन्दि आउने तथा सञ्चित धनखजानाको खर्च हुने, अस्वस्थता बढ्नसक्ने आदि कुरालाई पनि गोचरले लक्षित गरिरहेको छ । मानसिकरुपमा डर लाग्ने, जनव्यवहारमा अन्यायमा पर्नसकिने, मानप्रतिष्ठामा ह्रास आउने, विनाजरुरीको क्षेत्रमा अनर्थ परिश्रम हुनजाने आदि संघर्षजन्य परिवेशको सामना गर्नपर्न सक्नेछ । अल्लि सावधानी एवं संयम र परिश्रमपूर्वक स्वकर्ममा तत्लिन रहनाले केहीहद्सम्म उपलब्धि मिल्नसक्ने छ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन व्यापार व्यवसाय एवं उद्यमधन्दामा बढोत्तरी हुने र आयआम्दानी बढ्ने देखिएको छ । कर्मयोगीको लागि दिन राम्रो उपलब्धिमूलक रहनेछ । समयको सदुपयोग गर्नाले व्यवसायबाट राम्रो लाभार्जन लिनसकिने छ । औकात एवम् स्तर अनुसार समाजसेवा, राजनीति एवम् जागिर आदिमा प्रगति हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आत्मबल एवम् यशकृति बृद्धि हुनाले सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ । प्रशंसक बढ्ने र आफन्तिको शुभसमाचार प्राप्त हुनेछ । सम्मानित यात्राको अवसर पनि मिल्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज विवाह योग्य युवायुवतीको विवाहबन्धनको बारमा प्रसङ्ग चल्नसक्ने छ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सकारात्मक छ । मानसम्मान प्राप्त हुने र व्यापार व्यवसाय एवम् जागिर आदि पेशाको क्षेत्रमा अनुकूलता सृजना हुनेछ । समाजसेवाका कार्यमा ग्रहले राम्रो बल दिइरहेको देखिन्छ । उच्च निकायका व्यक्तित्त्वहरुसँगको भेटघाट तथा संपर्कले मानिसक आँट एवम् उच्च मनोबल बढ्नेछ । सम्भावनाहरु हराइरहेका केही कामको सम्भावनाहरु पनि भेटिनसक्ने छ । समयको अनुकूलतालाई बुझेर राम्रो कार्यमा सदुपयोग गरी विशिष्ट दर्जा एवम् पक्षका व्यक्तित्त्वसँग महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लिनसकिने छ । राज्यको क्षेत्रबाट पनि आज काम लिनसक्नु हुनेछ । भगवान माँ इन्द्रायणीको दर्शन भक्ति शुभप्रद हुनेछ ।